मञ्जु पौडेलको 'आधि उमेर ढल्किंदा'
२०७६ सावन ९
बजारमा तीजको माहौल छ । दिनहुँ दर्जनौँ तीजका गीतहरू सार्वजनिक भएका छन् । यस्तै सन्दर्भमा गायिका तथा प्रस्तोता मञ्जु पौडेलको मौलिक तीज गीत सार्वजनिक भएको छ । हरेक तीजमा मौलिक तीजको भाका लिएर आउने पौडेलले यसपालिको तीजमा काम भन्दा भन्दै आधि उमेर ढल्केको पीडालाई गीतमार्फत पोखेकी छन्। ‘काम भन्दै गयो मेरो आधि उमेर घन्काइदेऊ मादलु नाच्छु घुमेर’ काम र पैसाको लागि सधैँ व्यस्त रहने आम नेपालीको जीवनशैलीप्रति लक्षित गर्दै ल्याइएको यो गीतको भिडियोमा स्वयं मञ्जु पौडेल र चर्चित कार्यक्रम उकाली ओरालीकी प्रस्तोता अनुषा पौडेल फिचर्ड छन् ।
तिज गीत 'बेइमानी लाहुरे' सार्वजनिक
चिजा तामाङ्गको गीतमा लाहुरेको पर्खाईमा रहेकी प्रेमिकाको भावनाहरुलाई समेटिएको छ । कृति केसी, सुमित्रा गुरुङ्ग (बिनिता) र सन्तोष थापा मगर गीतको भिडियोमा देखिएका छन् । रेमेश बाबु थापाको शब्द रहेको गीतलाई विश्वास नेपालले एरेन्ज गरेका हुन् । गीतको भिडियो दिप गुरुङ्गको निर्देशन आशुतोष एडीको कोरियोग्राफि र शम्भु चालिसेको छाँयाकनमा तयार भएको हो ।
एभेन्जर्स: इन्डगेमले सर्वाधिक कमाउने चलचित्रमा अवतारलाई उछिन्ने
२०७६ सावन ६
सन् २००९ को अमेरिकी चलचित्र अवतारलाई पछि पार्दै यो हप्ता एभेन्जर्सस् इन्डगेम सर्वाधिक कमाइ गर्ने चलचित्र बन्दैछ।
सिद्धहस्त एक तान्त्रिकको जीवनीलाई लिएर नेपालभाषामा बनेको चलचित्र ‘जामनः गुभाजु’ गत वर्ष मङ्सिर ८ गतेदेखि हालसम्म लगातार चलिरहेको छ । अब चलचित्रले ५१ शो मनाउने तयारी पनि गर्दैछ । आदिवासी जनजातीय चलचित्र हुनाले बक्स अफिसमा पर्न नसकिएको भनिए पनि प्रायः शनिबारजसो मात्र प्रदर्शन हुने पाएको चलचित्रले नौ महिनाको अवधिमा करीब सात हजार दर्शक भने पाइसकेको छ ।
“औधोगिक शान्ति नेपाल म्युजिक अवार्ड २०७६”
“औधोगिक शान्ति नेपाल म्युजिक अवार्ड २०७६” यहि आउदो भदौ २५ गते राष्ट्रिय नाच घर जमलमा हुने भएको छ । उक्त अवार्डको लागि श्रावन महिना भरि आबेदन फारम खुल्ला रहेको छ भने भदौको दोश्रो हप्ता भित्र टप ५ मनोनयन सार्बजनिक गरिने जानकारी आयोजक सस्थाका अधक्ष्य सन्दिप महतले जानकारी गराएका छन् । बिगत लामो समय देखि नेपालको विभिन्न जिल्लाहरुमा औधोगिक ब्यापार मेला महोत्सब तथा सांगीतिक कार्यक्रम आयोजना गरि सयौ कलाकारहरुलाई स्टेज प्रदान आएको सस्था
गीतकार अम्बिका गुरुङको शब्दमा 'नेपालकी छोरी' सार्बजनिक
२०७६ सावन १
अमेरिका निवासी बरिष्ट गीतकार तथा साहित्यकार सर्जक अम्बिका गुरुङको शब्द तथा बाल गायिका क्रिष्टिना श्रेष्ठको सुमधुर आवाजमा सजिएको नयाँ गित “नेपालकी छोरी” को म्युजिक भिडियो सार्बजनिक भएको छ । सयौं चर्चित गीतहरुलाइ आफ्नो मिठो शब्दमा उतारेर नेपाली गित संगीतलाइ नयाँ उचाइमा पुर्याउन सफल गीतकार गुरुङ मोफसलमा बसेर सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय हुने चर्चित नाम हो ।
नयन सोडारीको तीज गीत ‘मिठो दर खाने हो’ सार्वजानिक
गायक तथा संगितकार नयन सोडारी ‘चिन्तित’ले मौलिक तीज कोशेली बजारमा ल्याएका छन् । सोडारीको तीज गीत ‘मिठो दर खाने हो’ सार्वजानिक भएको छ ।
खुमन अधिकारी र मालति खरेलको तिज गित 'पैसा मागम की' सार्बजनिक
चर्चित लोकदोहोरी गायक खुमन अधिकारि र मालती खरेलको नयाँ तिज गित 'पैसा मागम कि' सार्बजनिक भएको छ । दर्जनौ चर्चित लोक भाकाहरु नेपाली सांगीतिक बजारमा पस्केर चर्चामा आएका गायक खुमन अधिकारी र मालती खरेलको तिज गित अहिले चर्चामा रहेको छ ।गायक खुमन अधिकारीको शब्द तथा संगीत रहेको यस गीतलाई आशिष अविरलले एरेन्ज गरेका छन् ।
२०६ औं भानु जयन्तिको अवसर पारेर तुंगनाथ उपध्यायको ‘सुन्दर(काण्ड (रामायण)’ को पहिलो अंश सार्वजनिक भएको छ । जसमा गाएन तथा संगीत स्वंम तुंगनाथकै रहेको छ । ‘सुन्दर(काण्ड (रामायण)’ एउटा सर्वथा नौलो शैलीमा आदिकवि भानुभक्तीय रामायणको ‘सुन्दरकाण्ड’बाट केही अंशविशेष को संगीतमय गायनको एउटा प्रारम्भिक प्रस्तुति हो जसको लेख्य नेपाली भाषाको डोरीले विशवभरी छरीएर बसेका हामी नेपालीहरुलाई एकतामा बाँध्न सफल भयो
भानु हौ काव्यमन्दिर
नेपाली काव्य धाराका शोभायमान भाष्कर भानुभक्त तिमी धन्य भन्दैछौँ काव्य निर्झर । तिम्रा काव्यकला हेरी आनन्द ओजका रथी भानु हौ सब भन्दै छौँ भाषासाहित्यका छवि ।
आउ नाचौँ सङ्गी हो...
गत वर्षको तीजमा सन्देश मुलक तीज गीत लिएर आएकी सञ्चारकर्मी गीता अधिकारी यसपालीको तीज गीतमा तीजमा छम छम नाच्न भन्दै आउने भएकी छन् । गीताको शब्द रचना, नायिका तथा गायिका सारिका घिमिरेको स्वरमा रहेको तीज गीत ‘आउ नाचौं सङ्गी
थापाको रिमेक गीत ‘किन आउँछ याद तिम्रो’ सार्बजनिक
बरिष्ठ गीतकार बी.बी. थापाले पुनः रेकर्ड गराएको (रिमेक) गीत 'किन आउँछ याद तिम्रो' बोलको गीत सार्बजनिक भएको छ । प्रसिद्ध संगीतकार स्वर्गीय नातीकाजीको संगीतमा रहेको यस गीत किन आउँछ याद तिम्रो गीतकार बी.बी. थापाको आफ्नो युट्यूव च्यानल बी.बी. थापा इन्टरटेनमेन्टबाट सार्बजनिक गरिएको हो । यस अघि पहिले नै प्रदिप राज पाण्डेको स्वरमा सजिएको यो गीत यतिखेर मेलीना राईको स्वरमा आएको छ ।
शिव परियार र बुनु श्रेष्ठको नया गीत ”तिमी ओके” सार्वजनिक
गायक शिव परियार र गायिका बुनु श्रेष्ठको स्वर रहेको ”तिमी ओके” बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । शुक्रबार गीतलाई साउन्ड मिलको अफिसियल युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक गीतमा कृष्ण भारद्वाजको शब्द, नेत्र काफ्लेको संगीत रहेको छ । गीतलाई जीवन बडूले एरेन्ज गरेका हुन् ।गीतको भिडियोमा अहिलेको चर्चित मोडल अन्जली अधिकारी ,गम्भीर बिष्ट र सुरेन्द्र बसेललाई फिचरिंग गरिएको छ ।
दिगो सहरी विकास तथा योजनाबारे डा. जोशीको नयाँ पुस्तक
देश संघीयतामा गइसकेको छ तर संघीयताको उचित व्यवस्थापन र कार्यान्वयनबारे हामी अझै अन्यौलमा छौं । सहरीकरणको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ तर त्यसको उचित व्यवस्थापन र स्रोत परिचालन गर्न असमर्थ भई हाम्रा सहरहरु अस्तव्यस्त छन् र कंक्रिटको जंगलमा परिणत हुँदै छन् । यस्तो स्थितिमा डा. जीवगर जोशीको नयाँ पुस्तक ‘नेपालमा सहरी विकास योजना : एक दीगो दृष्टिकोण’ निकै उपयोगी एवं सान्दर्भिक हुने निश्चित छ ।
गायक प्रकाश सपुत ‘डीएनए क्लोथिङ’को सद्भावना दूत
लोकगायक प्रकाश सपुत ‘डीएनए क्लोथिङ’ ब्राण्डको एम्बेसडर भएका छन् । विगत दुई वर्षअगाडि बजारमा आएको कपडाको ब्राण्ड डीएनएले बुधबार प्रकाशलाई एक कार्यक्रमका बीच एम्बेसडरको घोषणा गरेको हो । एक वर्षका लागि एम्बेसडरको रुपमा डीएनएसँग हस्ताक्षर गरेका प्रकाशले आफ्नो लागि यो ठूलो सफलता बताए । ‘मेरो लागि डीएनएसँग जोडिनु ठूलो सफलता हो’, प्रकाशले कार्यक्रममा भने, ‘म यस ब्राण्डसँग जोडिनुको मुख्य कारण देश विदेश छरिएर रहेका युवाहरुमाझ छिटो पुग्न सकूँ भन्ने हो ।’ डीएनएको तर्फबाट केदार प्रसाद न्यौपानेले गायक प्रकाशलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरे ।
शान्ति काव्य प्रवाहमा असारे गीत
प्रकाश बस्नेत गफाडीले शान्ति काव्य प्रवाहको ८१ औँ श्रृंखलामा वाचन गरेको गजलको अंश हो यो । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा प्रत्येक महिनाको अन्तिम विहिवार आयोजना गरिने शान्ति काव्य प्रवाहको ८१ औँ श्रृंखला २०७६ असार २६ गते काठमाण्डौँमा सम्पन्न भएको छ । काव्य प्रवाहमा कविहरुले गीत, कविता, गजल, मुक्तक वाचन गर्दै असारे गीत समेत घन्काएका थिए । समाजका सभापति उत्तम पुडासैनीको सभापतित्वमा सम्पन्न काव्य प्रवाहमा ३३ जना कविहरुले रचना प्रस्तुत गरेका थिए ।
लोकप्रिय लोक गायक प्रकाश सपूत ‘डिएनए क्लोथिङ’ ब्राण्डको एम्बेस्डर भएका छन् । बिगत दुईबर्ष बजारमा आएको कपडाको ब्राण्ड डिएनएले बुधबार प्रकाशलाई एक कार्यक्रमका बिच एम्बेस्डरको घोषणा गरेको हो । एकबर्षका लागी एम्बेस्डरको रुपमा डिएनएसँग हस्ताक्षर गरेका प्रकाशले आफ्नो लागी यो ठूलो सफलता बताए । ‘मेरो लागी डिएनएसँगे जोडिनु ठूलो सफलता हो ।’
सरिताको पहिलो गीत 'उडेर जाऊँ' सार्वजनिक
कुनै समय यस्तो थियो गायक गायिका मात्रै सबैभन्दा अगाडी हुन्थे तर अहिले समय बदलिएको छ। संगीतकार र गीतकारले पनि आफ्नो परिचय स्थापित गर्न सफल भएका छन। दर्शक सोर्ताले फलानो गीतको संगीतकार र गीतकार भनेर चिन्न थालेका छन। संगीत भरेर र गीत लेखेर नाम र दाम कमाउन सकिने समय आएको छ। संगीत क्षेत्रको यहि परिवर्तन र आकर्षणले होला नयाँ पुस्ताका गीतकार र संगीतकारको आगमन दिनानुदिन हुँदै छ।
''ओेए काले'' कतारमा भब्य कार्यक्रमकाबिच सार्वजनिक
सन्ध्या फिल्म्स् एन्ड मिडिया प्रा लीको दोश्रो म्युजिक भिडियो ”ओए काले” डिजीटल बजारमा आएको छ । सन्ध्या ग्रुप अलखोर कतारको साहित्यिक बिभाग मुग्लानी सौगातको ७२ औ साहित्यिक वाचन डबलीकोअवसरमा भिडीयो बिमोचन गरि बजारमा ल्याईएको हो । बिमोचन संगै रिलिज भएको भिडियो एक्का कम्पनी युट्युब च्यानलबाट सार्बजनिक गरिएको छ । डिजीटल बजारमा आए संगै बिभिन्न माध्यमबाट गीतको राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ ।
द्धन्द्धको पिडा पोख्दै नाटक 'अझै दुख्छ घाउ'